ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတရှီတိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ်၌ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးများ ဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူပေပြည်နယ်၌ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် လုပ်နိုင်သမျှ အားလုံး အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ကြရန် အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ(CPC) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သူ သမ္မတရှီက ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း သေဆုံးဒဏ်ရာရသွားသူများ၏ မိသားစုဝင်များအား နှစ်သိမ့်အားပေးမှုပြုလုပ်ရန် နှင့် အခင်းဖြစ်စဉ်အားအချိန်နှင်တစ်ပြေးညီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အာဏာပိုင်များအား ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုသည် Shiyan မြို့ရှိ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာ ရပ်ကွက်ဈေးတစ်ခု၌ ဇွန် ၁၃ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁၂ ဦးသေဆုံးကာ အခြား ၃၇ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ တာဝန်ရှိသူဟာ မဖြစ်မနေ တာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်” ဟု သမ္မတရှီ၏ ညွှန်ကြားချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ မကြာသေးခင်က နေရာများစွာတွင် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံးရေး နှင့်ဆက်စပ်၍ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း ၊ ယင်းဖြစ်စဉ်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် သင်ခန်းစာယူ လေ့လာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ တာဝန်ရှိသူများအားလုံးအနေဖြင့် လေးနက်တည်ကြည်စွာဆောင်ရွက်ရင်း နိုင်ငံရေးအမြင်ဖြင့် ဆင်ခြင် သုံးသပ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တင်းကြပ်စွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ၊ လူမှုအသိုက်အဝန်းတည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အား ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန်အတွက် အဓိက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့် ဌာနများအနေဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှီက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီခဲ့ချန်က သေဆုံးသူအရေအတွက် လျှော့ချနိုင်ရေး ၊ ဒဏ်ရာရသူများအား ဆေးကုသပေးနိုင်ရေး အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်အားအမြင့်ဆုံးဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း သီးခြားညွှန်ကြားချက်တစ်ခု ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဝန်ကြီးချုပ်လီက ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အခင်းဖြစ်အကြောင်းအရာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး တာဝန်ရှိသူများအား တရားဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောမတော်တဆဖြစ်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရန်အလို့ငှာ ဘေးအန္တရာယ်အလားအလာရှိသော နေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အဓိကနေရာများတွင် စောင့်ကြည့်မှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း ၎င်းက အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင် ဗဟိုအစိုးရဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို ယင်းမတော်တဆမှုအား ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းရာ၌ လမ်းညွှန်မှုပေးရန် စေလွှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း Shiyan မြို့သို့စေလွှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ဒဏ်ရာရသူများအား ဆေးကုသရေးများကို လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, June 13 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping has ordered all-out efforts to rescue the injured afteragas explosion in central China’s Hubei Province on Sunday morning.
“Those responsible must be held to account,” Xi stressed in the instruction.
Xi called for efforts to ward off major emergencies, ensure the safety of people’s lives and property, maintain overall social stability, and createagood atmosphere for celebrations of the 100th anniversary of the founding of the CPC.
Rescuers work atagas explosion site in Yanhu Community of Zhangwan District in Shiyan City, central China’s Hubei Province, June 13, 2021. (Xinhua/Xiao Yijiu)